Tadidintsika fa taloha teo ny K7 sy kapila sy CD fa amin’izao efa tsy izany intsony. Ny olana anefa dia tsy misy ny fampiroboroboana. Manjary tsy misy fanabeazana. Eto Madagasikara moa, indrindra, tsy dia misy fianarana mozika loatra. Matetika ny mpanao mozikantsika voatery maka tahaka. Tsy maintsy manaraka onjan-drano ianao ary sasatra raha hanao “Album” izany satria efa takon’ny Youtube. Tsy ampy ny fahefan’ny OMDA na ny ofisim-pirenena misahana ny zon’ny mpamorona. Raha ny tokony ho izy dia 6% amin’ny zavatra azo no mandeha amin’ny artista. Kely dia kely ary ny fahefan’ny OMDA dia tsy mbola ahafahan’ny artista mivelona amin’ny kantony. Tsy ampy olona ny OMDA ary tsy ampy vola. Misy borigady miady amin’ny piraty ao fa mbola lavitra ezaka satria toy ny tany an-dalam-pandrosoana rehetra dia laharam-pahamehana daholo ny zava-drehetra. Misy mizana tsindrian’ila mipetraka ho azy tahaka ny hoe i Jean Emilien izao tompondaka eran-tany amin’ny farara fa tsy fantantsika akory na maty aza kanefa ny Barea mbola nahavita ¼ -dalan’ny tompondakan’i Afrika dia efa tahaka ny inona no lazany sy fikarakarana azy ? Mila miady be amin’ny fitadiavana vahaolana maharitra satria tsy laharam-pahamehana eto Madagasikara ny kolontsaina, hoy izy. Rehefa tsy manana kolontsaina anefa ny olona dia mitsingevana, tsy mitehan-tany. Isika Malagasy amin’izao menatra ny milaza ny maha izy antsika, hoy hatrany izy.